जीवन-शैलि : शारीरिक सम्बन्धका बेला पुरुष भन्दा बढी चरम अवस्था चाहन्छन् महिला « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १७:२२
यौन सम्बन्ध शरीरलाई नभइ नहुने कुरा हो, तर कँहि यसबारे खुलेर कुरा गरिन्छ भने कँहि लुकाएर कुरा गरिन्छ । एक अनुसन्धानअनुसार महिलाले शारीरिक सम्बन्धको समयमा पुरुषबाट विभिन्न प्रकारका अपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
शारीरिक सम्बन्धको समयमा पुरुष पूर्णरुपमा केन्द्रित रहनुपर्ने चाहनामा महिलामा हुन्छ । मुख र हातका क्रियाकलाप धेरै हुनुपर्ने चाहनासँगै महिलाले ओठ, गर्धन र शरीरका अन्य भागमा स्पर्शको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
महिलाहरुले आफूलाई भन्दा पुरुषलाई छिटो चरम अवस्थामा पुग्ने कुरा बुझेका हुन्छन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बारबरा किसलिगले बाहिरी लक्षणबाट भन्दा पनि उनीहरुको चाहना र पोजिसनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
संवेदनशिल अंगमा उत्तैजना हुनेगरी बिस्तारै बिस्तारै कामको अपेक्षा महिलामा हुन्छ । पुरुषहरु शारीरिक सम्बन्ध छिटो गर्ने इच्छामा हुन्छन् ।
तर महिलाहरु भने शारीरिक क्रियाकलापमा बिस्तारै बिस्तारैको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । महिलाले शारीरिक क्रियाकलापका समयमा पीडा हुने कुनै पनि काम नहोस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् ।
महिलाले शान्त र अनुकूलको मौसमको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । शारीरिक सम्बन्धको समयमा ५० प्रशित महिलाले अनुकूल वातावरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
शारीरिक सम्बन्धका लागि पोजिसनको अवस्थाले पनि असर गर्छ । महिलाहरुले आफू तलपट्टिको भाग नरम र सजिलो हुनुपर्ने महसुस गर्छन् । अनुसन्धानमा संलग्न चिकित्सक होल्स टेजकाअनुसार तापक्रम, मौसम र आवाजले महिलाको शारीरिक सम्बन्धमा असर गर्छ ।
पुरुषमाथि आएर शारीरिक क्रियाकलाप गर्ने इच्छा धेरै महिलामा हुन्छ । केही महिलाले जनावरको पोजिसनमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २५ पुष २०७६, शुक्रबार १७:२२
के तपाइलाई यौन दुर्वलता छ ? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु
हाम्रो समाजमा यौन भन्ने वितिकै कुरा गर्न लजाउने गर्दछन् तर स्वास्थ्यका हिसावले झन यौनका कुरा
बाँझोपन भनेको के हो? जान्नुहोस् यसका लक्षण तथा रोकथामका उपायहरु
बाँझोपन केहो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । सामान्यतया दम्पतीले परिवारनियोजनको कुनै पनि साधनको प्रयोगविना
घरेलु उपायहरु : महिलाहरुमा सेतो पानी बग्ने समस्याको उपचार कसरी गर्ने ?
हाम्रो जस्तो अल्पबिकाशिल देशमा जहा महिला अझै पनि यौन स्वास्थको विषयमा खुलेर बोल्न लजाउँछन् ।
सबै महिलाहरु महिलाहरु आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा योनी चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन्। कहिलेकाँहि
जान्नुहोस् : पुरुषलाई मात्र लाग्ने प्रोष्टेट रोग के हो ? यसबाट बच्न के-के गर्नु पर्छ ?
सामान्यतया प्रोष्टेट ग्रन्थी पुरुषमा मात्र पाइने गर्दछ । त्यसैले यलाई पुरुष ग्रन्थी वा प्रजनन ग्रन्थी